बुबाको किरिया छोरीले गर्ने कि काकाले ? ममताले पाइनन् छोरासरह अधिकार::kamananews
बुबाको किरिया छोरीले गर्ने कि काकाले ? ममताले पाइनन् छोरासरह अधिकार
१३ साउन, २0७५ पोखरा । शुक्रबार त्रिशुली नदीमा खसेर भएको कार दुर्घटनामा पोखराका पर्यटन व्यवसायी मधु सुवेदीको मृत्यु भयो । मधुका छोरा छैनन्, दुई छोरीमात्रै छन् । जिउँदो हुँदा मधुले भन्ने गरेका थिए, मेरा यी दुई छोरीहरु छोरासरह हुन्, म मरेपछि यिनै छोरीले किरिया गरे हुन्छ ।